Nilaza fa nijirika ny rafitra lalamby ireo mpikatroka anjotra Belarosiana mba hanoherana ny hetsiky ny miaramila Rosiana · Global Voices teny Malagasy
Nanamafy ny tahotra ny mety hanafihan'i Rosia an'i Okraina ireo miaramila Rosiana ao Belarosia
Voadika ny 27 Janoary 2022 5:36 GMT
Vakio amin'ny teny русский, srpski, Español, English, українська, English
Ny fangon'ny Cyber-Partisans. Pikantsary avy amin'ny lahatsary nataon'i Hack Curio / Belarusian Cyber-Partisans tao amin'ny Vimeo.
Voalaza fa namaky ny rafi-pikirakirana lalambin'ny fanjakana sy namadika ho hafatra voaafin-tsoratra ny sasany tamin'ireo lohamilina sy angon-drakitra ao amin'ny Belarosiana Railway ny Cyber-Partisans Belarosiana, vondrona mpijirika ifotony manohana ireo ezaka fanoherana ny governemantan'ny mpitondra tsy refesi-mandidy Aliksandr Lukashenka. Niseho ny fanakorontanana taorian'ny nanamoran'ny rafitra lalamby Belarosiana ny fifindran'ny tafika Rosiana ho any Belarosia.
Namoaka hafatra fa tompon'andraikitra tamin'ny jirika ny kaonty Twitter an'ny vondrona mpijirika tamin'ny 24 Janoary:
Noho ny baikon'ny mpampihorohoro Lukashenka, mamela ny miaramila mpibodo hiditra ny taninay ny Lalamby #Belarusian. Navadikay hiafin-tsoratra (tsy afa-miasa) ny sasany tamin'ireo lohamilina, angon-drakitra ary toeram-piasana sasany an'ny lalamby mba hanapahana ny asany.❗️TSY voakitika kosa ny rafitra mandeha ho azy sy ny fiarovana mba hialana amin'ny toe-javatra maika.
Araka ny filazan'ny sampam-baovaom-panjakana Belta, nitatitra ny serivisy Lalamby Belarosiana tamin'ny 24 Janoary fa tsy nisy ny tapakila elektronika, amin'ny filazana ny “antony ara-teknika” tsy nolazaina. Loharanom-baovao iray avy amin'ny orinasan-dalamby nilaza tamin'ny vaovao tsy miankina Zerkalo.io fa “tsy voafehy” ireo rafitra ireo, saingy efa naverina tamin'ny laoniny izany baiko izany.
Yuliana Shemetovets, mpitondra tenin'ny Belarosiana Cyber-Partisans, nilaza tamin'ny sampam-baovao Reuters fa”natao hanakanana ny fihetsehan'ny tafika Rosiana ny fanafihana an-tserasera ary toa nisy fiantraikany tamin'ny zotran-dalamby”, saingy “aloha loatra raha hilaza fa nahomby izany.” Nilaza ny vondrona fa ninia tsy nanakorontana ny rafitra mandeha ho azy sy ny fiarovana ny lalamby izy.
Nilaza ny vondrona mpijirika fa vonona ny hanolotra ny fanalahidin'ny fanafenana izy raha toa ka avotsotra ireo gadra politika Belarosiana 50 izay miharatsy ny fahasalamany ary “sakanana” ny fisian'ny tafika Rosiana ao amin'ny firenena.
Nanafika ny tambajotran'ny Railway Belarosiana ny Cyber-Partisans. Navadi-tsoratra ny lohamilina, ny angon-drakitra ary ny toeram-piasana mba hampiadana ny fahatongavan'ny tafika ao Belarosia. Mitaky ny hamotsorana ireo gadra politika miisa 50 manana olana ara-pahasalamana izy ireo sy ny fanatsaharana ny fandefasana tafika
Nafindran'i Rosia ho any Belarosia ny fitaovam-piadiana sy ny miaramila talohan'izay lazain'ny firenena roa fa fanazaran-tafika iraisana efa nomanina hatry ny ela tamin'ny volana Febroary 2022. Nanampy ny fifandirana teo amin'i Rosia sy ny firenena tandrefana momba an'i Okraina mpifanolo-bodirindrina ireo drafitra ireo. Niteraka tahotra ny mety hisian'ny fananiham-bohitra ireo tatitra marobe milaza ny fivondronan'ny tafika Rosiana any amin'ny sisin-tanin'i Okraina sy ao Krimea sy Donbas voabodo, izay mandrahona ny hamerina indray ny fifandonan'ny Rosia-Okraina izay efa nokotrehana hatramin'ny taona 2014 ary efa namoizana ain'olona 14.000 mahery.
Natsangan'ireo manampahaizana momba ny teknolojiam-baovao ao an-toerana sy ny olom-pirenena hafa tamin'ny volana Septambra 2020 ny fisantarana andraikitra Belarusian Cyber-Partisans ho ampahany amin'ny firaisan'ny Belarusian Resistance (Suprativ) ifotony, taorian'ny fihetsiketsehana faobe manohitra ny governemanta noho ny fifidianana notoherina tao Belarosia izay nahatonga ny famoretana mahery vaika nataon'ny manampahefana.
Nilaza ny vondrona tany am-boalohany fa tompon'andraikitra tamin'ny fanakorontanana ireo tranonkalam-panjakana maro, fijirihana ny angon-drakitra tao amin'ny Minisiteran'ny Atitany sy ny governemanta anatiny ary ny famoahana ny anarana sy ny antsipirian'ireo mpikambana ao amin'ny mpitandro ny filaminana voarohirohy tamin'ny famoretana ireo mpanao fihetsiketsehana.